सरिता गिरीको घरमा तो’डफोड गरेको भन्दै हेमराज थापा प’क्राउ , गा’ली या ता’ली? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सरिता गिरीको घरमा तो’डफोड गरेको भन्दै हेमराज थापा प’क्राउ , गा’ली या ता’ली?
काठमाडौं : समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको घरको मूलढोकामा ढुं’गामुढा गर्ने एक जनालाई प्र’ह’रीले प’क्राउ गरेको छ। शुक्रबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बाजुरा घर भई कीर्तिपुरमा बस्दै आएका २८ वर्षीय हेमराज थापा’लाई न्युरोडबाट प’क्रा’उ गरेको हो।
‘सासंद सरिता गिरीको घरमा ढुं’गा’मुढा गर्ने हेमराज थापा भन्नेलाई प’क्रा’उ गरिएको हो,’ परिसरका प्रवक्ता तथा डिएसपी राजकुमार केसीले भने। मंगलबार विशालनगरस्थित गिरीको घरको मूलढोकामा था’पालगायत केही व्यक्तिहरूले क्ष’ति पुर्‍याएका थि’ए। उनीहरूले ढोकामा कालोझण्डा समेत राखेका थिए। उनीहरूले उक्त घटनाको भिडिओ समेत युट्युबमा हालेका थिए। उनीमाथि थप अ’नुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ।
सासंद गिरीले लिम्पियाधुरा र कालापानी समेट्न स्रोत र प्र’माण नखुलेको भन्दै नयाँ नक्सा समेट्न सरकारले ल्याएको संशोधनमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसकै वि’रो’धमा केही व्य’क्तिले गिरीको निवासमा तो’ड’फोड गर्न पुगेका थिए। सेतोपाटीबाट
Previous सरिता गिरी वि’रुद्ध रमेश प्रसाईंले मु’द्दा हाल्दै (भिडियो सहित) सहमत हुनेले शेयर गरौं ।
Next पाल्पाको तिनाउ खोलामा कार ख’स्यो,,,,😭😭